Umaki: isu le-injini yokusesha | Martech Zone
Tag: isu lenjini yokusesha
Imibuzo emi-5 yokubuza umxhumanisi wakho wokusebenzisa injini yakho yokusesha
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 18, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 18, 2017 Douglas Karr
Ikhasimende esilenzele isu lonyaka le-infographic lalisehhovisi lethu kuleli sonto. Njengamabhizinisi amaningi, babedlule ku-roller coaster yokuba nomxhumanisi omubi we-SEO futhi manje baqashe inkampani entsha yokubonisana ne-SEO ukubasiza ekulungiseni umonakalo. Futhi kube khona umonakalo. Okumaphakathi necebo le-SEO elibi bekuyi-backlinking kunqwaba yamasayithi ayingozi. Manje iklayenti lithinta ngalinye lalawo masayithi ukuze lisuswe
Le infographic ibizwa nge-An Illustrated Guide to SEO Automation, kepha ayiqondene neze-automation, kumayelana nenqubo edingekayo yokwenza ngcono imiphumela yakho yokumaketha yenjini yokusesha ngecebo eliqhubekayo. Izici zenqubo zingenziwa ngemishini… kepha uma wenza izinto ezinjengokuthenga nokwenza i-backlinks ezenzakalelayo, inkampani yakho isenkingeni. Ukusebenza kwezinjini zokusesha ngokuyinhloko kuyinqubo yesandla edinga ukuthi wenze ucwaningo oluningi, ukwandise okuqukethwe kwakho,